Semalt SEO Atụmatụ Para Sitios Multilingües
Ndị na-ede blọgụ nke Muchos na-agbakwụnye nsogbu na-eme ka ha na-echekwa ihe dị iche iche na a web site. Nsogbu nsogbu bụ nke bụ eziokwu na ị na-SEO. Ọ bụrụ na ị na-eme ihe ọ bụla, ọ ga-eme ka ọ bụrụ na ị na-eme ihe ọ bụla na-eme ka ọ bụrụ na ị na-eme ihe ọ bụla, ma ọ bụrụ na ị na-eme ka ọ dị mma - ventilatore da soffitto senza luce bianco. N'ikpeazụ, ọtụtụ ndị na-arụ ọrụ dị iche iche na-arụ ọrụ dị ka ndị na-adịghị mma nke oké osimiri.
Entonces, ọ bụ: ¿hará tu sitio multilingüe dañar ị SEO ma mejorar los esfuerzos? Max Bell, bụ otu n'ime ndị ọkachamara isi Ọkachamara , ihe ọ bụla dị iche iche nke SEO na-eme ka ọ bụrụ na ị na-eme ka ọtụtụ ndị na-elekọta mmadụ.
Ogologo otutu ebe obibi SE SE
N'elu Google algorithm, a na-emepụta ihe ndị ọzọ na-eme ka ndị ọzọ na-arụ ọrụ na-emetụta. Google ọnụ ọgụgụ na-eme ka ha na-eme ka ihe na-adịghị mma ma ọ bụrụ na ị na-eme ihe na weebụ. Ọ bụrụ na ị na-eche na ị na-eme ka ọ bụrụ na ị na-eme ka ọ bụrụ na ị na-enwe nsogbu na-enweghị nsogbu. Site na nke a, Google nwere ike ịmepụta nke ọma na nzuzo na ebe nrụọrụ weebụ na mpaghara. Ọ bụrụ na ị na-arụ ọrụ, ọ na-eme ka onye ọ bụla na-eme ka ị na-eme ihe ọ bụla na-eme ka ọ bụrụ na ị na-eme ihe ọ bụla. Ntuziaka nke Google bu ihe ndi ozo. Dị ka ihe atụ, ọ dịghị ihe ọ bụla na-eme ka ọ bụrụ na ị na-enweta ya, dị ka ị na-enweghị ike iji URL na Google URL.
Ọ bụrụ na ọ bụ Google, Google gọọmenti nwere ike ịchọpụta ọtụtụ ọdịnaya dị iche iche. El relleno de palabras clave es uno de los métodos de SEO de sombrero negro que implica el uso excesivo de palabras clave para engalar al sistema y ubaarlo primero. Ọ bụrụ na ị na-arụ ọrụ, dede la actualización de enero de 2017, ma ọ bụrụ na ị na-agụnye ihe na-egosi. E nwere ọtụtụ asụsụ dị iche iche na-eme ka ọ bụrụ na ị na-eme ka ọ bụrụ na ọ na-enweghị ihe ọ bụla na SE SE. Ọ bụrụ na ị nwere ike ịbanye na nke a.
Tener exito con el sitio web multilingüe
Ọ bụrụ na ị na-achọpụta na ị na-eji ọtụtụ ndebanye aha na weebụ, configurarlo is otro important factor. Ọ bụrụ na ị na-arụ ọrụ, ị nwere ike ịchọta ndị ọ bụla nke Google bots na-ele anya na-adabere na a na-eme egwuregwu ụlọ ọrụ. Ọ bụrụ na ị chọrọ, ị ga-eme ka ọ bụrụ na ị nwere ike ịbanye na gị web site SEO falle. Ọ bụrụ na ị na-eme ihe ọ bụla, iji URL na-eme ihe dị mkpa. Nke a na-eme ka ọ bụrụ na ọ bụ Google na-achọpụta ihe ọ bụla na-eme ka ọ bụrụ na ọ na-achọpụta ihe dị iche iche ọ bụla na-eme ka ọ bụrụ ozi. Nrụ ọrụ:
A dominio de nivel elu (TLD). Ọ bụrụ na ị na-eme ka a na mba. Ọ na-eme ka ị na-eme ihe ọ bụla. Ọ bụrụ na ị na-ahụ maka google google. Weebụ ebe nrụọrụ weebụ dị na peeji nke: mywebsite.de
Subdominios genéricos (gTLD). Ọ bụrụ na ị nwere ike ịchekwa ihe nchebe URL. Ọ bụrụ na ị na-eme ihe ọ bụla, ọ na-eme ka ọ bụrụ na ị na-eme ka ọ dị elu (TLD). Weebụ ebe nrụọrụ weebụ dị ka: de.mywebsite.com
Subdirectorios genéricos. Ọ bụrụ na ị na-eme ya. Hichapụ URL nke URL. Na URL na ị nwere ike ịchọta ebe ọ bụ na mywebsite.com/de/URL
Na-edeba aha, na-enyere gị aka iche iche na-eme ka ị na-eme ka anyị na-agụnye ma ọ bụ ndị na-eme ka anyị na-adịghị mma. Ọ bụrụ na ị na-eme ihe ọ bụla, ị na-eme ka ahịa ahịa dị ọhụrụ recomiendan que tenga cuidado con esta técnica. Ọ bụrụ na ị na-arụ ọrụ, ọtụtụ ndị na-eche na ị na-eche na ị nwere ike iwepụta ma ọ bụ na-enweghị nsogbu. Mgbe Google bots chọpụtara na ị nwere ike ịmepụta, afecta negativamente na ranking nke SEO. N'otu oge, ọ na-eme ka ọtụtụ ndị na-eme ka ndị ọzọ na-emekọ ihe. Ọ bụrụ na ị na-eme ihe ndị ọzọ, ị nwere ike ịhazi ma ọ bụrụ na ị na-arụ ọrụ site na SEO.